Wax Ka Ogoow Kooxaha Uu Messi Ku Biiri Karo Kaddib Markii Uu Ka Tegay Barcelona – Garsoore Sports
Wax Ka Ogoow…
Marka hore Marca kaddibna RAC1 ayaa raacisay warar sheegaya in xiddiga reer Argentina Lionel Messi uu u sheegay Barcelona inuusan heshiis cusub u saxiixi doonin kooxda.
Kaddib Barcelona ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in heshiis la isku afgartay laakiin aan la saxiixi karin sababo la xiriira xeerarka dhaqaalaha ee La Liga.
Mar haddii uu Messi ka tegay Barcelona oo uu ku qaatay dhammaan xirfadiisa-cayaareed, kooxda xigta ee uu ku biiri karo ayay dunida cayaaraha ka fikiraysaa?
XAGEE AYUU AADAYAA?
Maadaama uu yahay wakiil xor ah Messi wuxuu xor u yahay inuu u saxiixo kooxda uu jecleysto (oo bixineysa xirmada mushaharka uu doonayo iyo khidmadda saxiixa) laakiin dhab ahaantii waxaa jira kooxo yar oo daneynaya una muuqda kuwa ugu cad-cad ee xiddigan jecleysan karo.
Kooxda Manchester City ayaa hubaashii ah dookh uu Messi dooran karo, xaqiiqdii waana koox awoodda inay mushaharkiisa bixiso iyo sidoo kale joogitaanka tababarihiisii hore Pep Guardiola.
City waa kooxda ugu fiican Ingiriiska haatan waana mid ka mid ah kooxaha ugu cadcad Champions League-ga. Intaa waxaa sii dheer kooxdooda inay haataan lasoo saxiixdeen Jack Grealish islamarkaana ay doonayaa saxiixa Harry Kane waxayna taa ka dhignaan kartaa in aan looga baahan doonin inuu wax walba u sameeyo sidii uu u sameeyay Barcelona labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay.
Xulashada kale ee caanka ah waa dabcan PSG. Naadi kale oo jeeb weyn islamarkaana lacag badan heysta xiisana u muujineysa Lionel Messi. Sababta uu ugu biiri karo PSG waa mid aad u fudud. Aragti ahaan Ligue 1 way ka sahlan tahay Premier League-ga, xitaa haddii PSG ay horyaalka u lumiyeen Lille xilli-cayaareedkii hore PSG weli waa kooxda ugu awoodda badan horyaalka heerka 1aad ee Faransiiska. Sidaas darteed Messi waxa uu heli karaa keyn weyn oo uu ku nasan karo oo islamarkaana ku beegsan karo ku guuleeysiga tartanka Champions League-ga.
Intaas waxaa sii dheer inuu la cayaari doono saaxiibo u dhow isaga oo kala ah Neymar Junior iyo Angel Di Maria iyo sidoo kale superstar-ka Kylian Mbappe.
Dhinaca kale waad ogtahay in Florentino Perez uu jeclaan lahaa inuu Messi kusoo jiido kooxda uu madaxweynaha ka yahay ee Real Madrid laakiin taasi uma muuqato mid aad u macquul ah.
Kooxa ka dhisan MLS-ka Mareykanka ama Bariga Dhexe ayaa awoodi kara mushaharkiisa laakiin inkasta oo midka hore uu u muuqdo mid ku qotoma raad-raaca xirfaddiisa kubbada-cagta haddana haatan uma muuqdo mid weli dhici kara.
Sidoo kale waxay taasi lamid tahay inuu dib ugu noqon karo kooxdiisii ugu caruurnimo ee Newell’s Old Boys.
Xaqiiqdii Messi weli waa mid ka mid ah cayaartoyda ugu fiican adduunka, haddii uusan ahayn kan ugu fiican. Waa inuu u cayaaraa mid ka mid ah kooxaha ugu sarreeya Yurub. Laakiin labada koox ee kaliya ee runtii awoodi kara inay isaga helaan waa Manchester City iyo PSG.
PSG Oo Hoggaamineysa Tartanka Saxiixa Messi